Iindaba- Namhlanje, oomatshini bakaMaoheng bamenywa ukuba bathathe inxaxheba kumboniso wokutya kwaye badibana nabahlobo abaninzi abanokubambisana.
Sineqela lobuchwephesha elineminyaka eli-16 yoyilo kunye namava emveliso, enokuthi ibonelele ngeskimu esipheleleyo sokuvavanywa kwembewu kuyilo lwesiko.
Inkampani ineziqinisekiso zelungelo elilodwa lomenzi wechiza lesizwe ezintlanu. Kwaye ngophuculo oluqhubekayo kwimarike, iye yaziwa ngokubanzi kwaye yanconywa ngabathengi.
Ngokweemfuno zokukhetha abathengi ngezixhobo ezahlukeneyo. Sinesikim sokuhlola izixhobo eziqolileyo sokulungisa imbewu yengqolowa yombona, amazimba eembotyi zesoya, iichickpeas, iimbotyi ezibomvu, iimbewu zesesame, amandongomane, rapeseed, imbewu yeetshilisi nezinye izinto
Siya kwenza konke okusemandleni ethu ukubonelela ngeemveliso kwaye senze konke okusemandleni ethu ukukukhonza. UMaoheng Machinery unokubonelela: Umatshini ococekileyo wokucoca imbewu ngescreen somoya kunye netafile yomxhuzulane ephindwe kabini (ingqolowa yengqolowa, i-rice awnner, i-sorghum sheller), Umatshini wokucoca ukutya okuhlanganisiweyo okuphindwe kabini Iscreen somoya kunye neetafile zomxhuzulane, umatshini womoya wokucoca ulwelo lomxhuzulane (uxinzelelo oluqinisekileyo, uxinzelelo olubi), umatshini wokucoca uhlobo lwebhanti, isahluli semagnethi, i-magnetic de-soiler, ilifti yebhakethi, ikhonkco, umatshini wokutyabeka imbewu, i-de-stoner, imbotyi umatshini ipolishi, umqokeleli uthuli, itafile womxhuzulane, grader iimbotyi, inkqubo ibhegi isikali, njl
Kutheni ukhetha maoheng:
Ukufunyanwa kwesatifikethi solawulo lwekhwalithi ye-ISO9001 kunye nenqanaba lesizwe le-AAA yeshishini lokuqinisekisa isimilo esihle.
2.Adopting advanced esizisebenzelayo ngoomatshini kunye intelligentization endaweni yokusebenza yemveli manual konga iindleko zabasebenzi kwaye kuphucula kakhulu ukusebenza kwemveliso.
3.Umatshini uhambelana nomgaqo we-ergonomic, ukusetyenziswa kwexesha elininzi kunye nokugcina amandla, ukusebenza ngokulula nangokukhawuleza.
Ukhuseleko 4.Safe, umatshini ngokwawo ukhuseleko ukuvuza, ukusebenza ekhuselekileyo kunye nokusetyenziswa.
5.Ukucima iteknoloji yokulungisa, ukuphucula ubunzima, amandla e-workpiece yensimbi, ukuqinisa amandla okunciphisa kunye nokuxhatshazwa kwe-corrosion, ukuphucula ubomi benkonzo yezixhobo.
6.Ukugxila kwiimfuno zabathengi kuzibophelele kulwakhiwo lwe- "industry-university-research" kunye nenkqubo yokuyila izinto ezintsha.
Ixesha Post: Sep-23-2019